Isbedelka Ganacsiga Indy: Waqtiga ugu dambeeya waa Berri! | Martech Zone
Markii aan ku sugnaa Houston, mid ka mid ah dadkii hadlay ayaa xusay sida shirkad ugu qarash gareyso ololehooda lacag ka badan inta ay ku bixin doonaan joogitaanka online. Qofna ma weydiinayo soo saaraha sariirta waxa ku soo noqoshada maalgashiga ee ku yaal fadhiga maqaar fiican ee hoolka - laakiin qof kastaa wuu gooyaa oo wuu ka baxaa qiimaha website cusub.
Shirkado aad u tiro badan ayaa iska indhatira istiraatiijiyadda gebi ahaanba - aad ayey ugu mashquulsan yihiin istaraatiijiyadooda hadda si ay uga walwalaan an istiraatiijiyadda suuqgeynta internetka. Websaydhkaagu wuxuu heli doonaa booqdayaal ka badan kuwa kaa soo gala oo leh naqshad weyn iyo istiraatiijiyad ka dambeysa! Waxaa la joogaa waqtigii dib-u-habeyn lagu sameyn lahaa, laakiin way adag tahay in qiil loo helo… ku dhowaad aan macquul ahayn dhaqaalahan. Ilaa hadda…
Haddii aad ganacsi ku leedahay bartamaha Indiana, halkan waa fursad! Mid ka mid ah shirkadaha maxalliga ah, Tartanka Sameynta Ganacsiga Indy wuxuu noqon doonaa mid si wanaagsan loogu qalmo. Shirkada guuleysata waxay heli doontaa adeegyo suuq geyn ah, server cusub, Websaydh iyo agabyada xafiisyada iyo abaalmarino kale. Iyadoo in ka badan $ 80,000 oo ah badeecooyin iyo adeegyo loogu deeqay oo ka socda ganacsiyada maxalliga ah, Tartan Sameynta Ganacsi ee Indy wuxuu ku leeyahay milkiilayaasha ganacsiyada dadaala, "ku raaxeysta wax ka beddel annaga, waad kasbatay."
Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa berri - Julaay 29, 2009! Fiiri liiska abaalmarinta - waxay ku jiraan xirmo 40 baloog leh Compendium Blogware, sidoo kale! Waxaan doonayaa inaan arko haddii aan lahadli karo kooxda si ay iigu ogolaadaan inaan ku tuuro xirmo la-talin saddex-biloodle ah $ 3,000 giraanta sidoo kale - si aan uga caawiyo istiraatiijiyadda nuxurka, is-dhexgalka warbaahinta bulshada, kormeerka beddelaadda, iwm.
Shaqo wacan dadka waaweyni Sanduuq yar iyo Suuq geynta si loo dhigo tartankan weyn.
Tags: automatticxogta dalabbeen abuur boodhGuy Kawasakimaroodiivars boodhadhka been abuurka ahivars chowdernuuradiinxayeysiinta fiidiyowga
Dhigista Qiimaha Warbaahinta Bulshada ee Dalxiiska